हिन्दुत्वको नारा निषेधः महासमिति सदस्यको भावना विपरित काँग्रेस | Citizen Post News
हिन्दुत्वको नारा निषेधः महासमिति सदस्यको भावना विपरित काँग्रेस
२०७५ पुस १० गते ११:०१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १० दिनसम्म राजधानीमा चलेको महासमिति बैठकमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संविधान परिवर्तन गरी नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणाको माग गरेका छन् । तर, उनीहरूको यो मुद्दालाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले किन महासमिति बैठकमा प्रस्तावको रुपमा छलफल चलाएन । करिव एक हजार ६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर संकलन गरी महासमिति बैठकमा सभापति देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर कांग्रेसमा हिन्दुको मुद्धालाई अघि सारेमा भावी राजनीति डामाडोल हुने भय र त्रासले कांग्रेसका शीर्ष र प्रभावशाली नेताको जोडबल र दबाबमा त्यो मुद्दालाई संवोधन समेत गरिएन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै सहआयोजक र सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अध्यक्षता गरेको एसिया प्यासिफिक पिस फेडरेसनको सम्मेलन नेपालमा गरेर नेकपाका नेताहरूलाई समेत होली वाइन पिलाएको घाटना सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा सर्वत्र हिन्दु धर्मप्रतिको अगाध आस्था र पक्षमा अभिव्यक्ती दिनेहरूको भिड लागेको थियो । कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काले शुरु गरेको हिन्दु राज्यको अभियानलाई अहिले केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले खुलेर नेतृत्व गरेका छन् । यो अभियानलाई भित्रभित्रै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साथ दिएर क्रियासिलता बढाएका छन् । पहिलो हिन्दुराज्यको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले भने अहिले बोली परिवर्तन गरेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि धर्म निरपेक्ष भनेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा जान सँधै मित्र राष्ट्र भारतको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने सन्दर्भलाई मनन गर्दै शीर्ष नेताहरू कोही हिन्दु राज्यको पक्ष त कोही विपक्षमा लागेका हुन् । बीपी पुत्र डा.शशांक कोइरालाले पीताको नाम भजाएर भारतीय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसँग सम्वन्ध बिस्तार गर्दै आएका छन् । उनी हालको सत्तारुढ दल बीजेपी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसँगको सम्वन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै आएका थिए । तर जव मोदी नेतृत्वको सरकारले गराएको प्रदेशको चुनावमा भाजपाले बुरा तवरले हार्यो तव कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको पनि बोली फेरिएको हो ।
आगामी मे महिनामा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा भाजपाको बुहमत नआउने र उसँगको सम्वन्धको जरुरत पर्ने नदेखेर कोइरालाले हिन्दु राज्यको माग नेपालमा गर्दा खुसी हुने भाजपा र भाजपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको इन्ट्रेस्ट विपरित कांगे्रस महासमिति बैठकको उद्घाटन समारोहमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनु पर्छ भनेर अभिव्यक्ति परिवर्तन गरेका थिए । हिन्दुबादी पार्टीका रुपमा पहिचान बनाएको भाजपाको इच्छा नेपाल हिन्दुराज्यको रुपमा रहोस भन्ने नै हो । अब भाजपाको भविश्य छैन भन्ने लागेपछि कोइराला हिन्दुराज्यको मागबाट पछि हटेका हुन् । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथसँग घनिष्ट सम्वन्ध बनाएका अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने मौन बसेका छन् ।
विगतमा खुमबहादुर खड्काले रोपेको कांग्रेसको गुटबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सफल पूर्णबहादुर खड्काले भाजपाको हार र कांग्रेस आईको जीतको समाचार भारतबाट सुनिरहँदा आफूभने हिन्दुराज्यको पक्षमा मौनता साँधेका छन् । उनले पहिले खुमबहादुरको गुटगत भेला गरेर नेपाललाइृ हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने अभियानमा साथ र सहयोग दिँदै आएका थिए । तर उनले आफूलाई पार्टीको विधान मस्यौदा समितिको संयोजकको हैसियतले काम गर्दा गर्दै फूर्सद नभएको दावी गर्दै आएका छन् । उता मोदीको फ्यानको भूमिकाको रुपमा विगतदेखि नै मधेश आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गर्दै आएका विमलेन्द्र निधि तीन सातामै यूटर्न भएका छन् ।
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा समेत नाकाबन्दी भन्न नरुचाउने उनले उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथ राम जानकी विवाह महोत्सवमा जनकपुर आउने भन्ने हल्ला चल्दै गर्दा आदित्यनाथ नेपाल आएमा मुलुकका सार्वभौमसत्तामाथिकै हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादा विपरित भ्रमण गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आलोचना गरेका थिए । तर आफ्नो भनाई सञ्चारमाध्यमा आएर माहौल तातेर सेलाउन नपाउँदै योगी आदित्यनाथलाई स्वागत गर्न निधि जनकपुरमा आफै उपस्थित भएका थिए । निधिको भूमिकाबाट शशंकित भएको भारतीय दुतावासले समेत उनलाई गलत बोटोमा नहिँड्न चेतावनी समेत दिएको थियो । वीजेपीले प्रदेशको चुनावमा हारिरहँदा उसको भविश्य छैन भन्ने बुझेका देउवा र पौडेल भने नेपालमा धर्म निरपेक्षता चाहिन्छ भनेर चाहना व्यक्त गरिरहेका छैनन् ।
नेपालमा संविधान जारी गर्दा २०७२ सालदेखि नै विजेपीको कोपभाजनमा परेका कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला भने बीजेपीको इन्ट्रेस्टमा आफू नचल्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन् । उनले आगामी दिनमा भारतमा कांग्रेसको आईको सरकार बनेमा आफूलाई पार्टी र सत्तामा जान समेत कुनै समस्या नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आएका छन् । सभापति देउवालाई भने भारतीय कांग्रेस आईले पत्याएको छैन् । कोइराला परिवारका सदस्य डा.शशांकले पहिले विजेपीसँग सम्वन्ध बनाए पनि अर्का सदस्य डा. शेखर कोइरालाले भने कांग्रेस आइसँगै सम्बन्ध बढाइका छन् । यसरी कांग्रेसका नेताहरूको इच्छा र चाहना हिन्दु राष्ट्र देखिँदैन ।
विधान महाधिवेशनको रुपमा चिनिएको महासमिति बैठकमा १२ केन्द्रीय सदस्य र त्यति नै सँख्यामा जिल्ला सभापतिहरूले हस्ताक्षर गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर उनीहरूको यो मागलाई पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले स्वीकार गरी प्रतिवेदनको रुपमा महासमिति बैठकमा पेश गरेन । जसले गर्दा पार्टी विधानको प्रकृयालाई अनुशरण नगरिएको बहानामा करिव ७ सय वढी महासमिति सदस्यको भावना र चाहनालाई पार्टी नेतृत्वले रद्धीको टोकरीमा मिल्काई दिएको छ । अव हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने केन्द्रीय तहका नेताहरू विस्तारै साइड लाग्दै आएका छन् ।
माइक खोस्दा बोल्न नपाएका यि जिल्ला सभापति:
पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा सहमति हुन नसक्दा विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन महासमिति बैठकसम्म नआएको भन्दै प्रतिवेदन माग गर्नेहरूलाई सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेस नुवाकोटमा सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीको हातबाट् माइक मात्र खोसेना कि उनलाई महासमिति बैठक अवधिभर बोल्न समेत दिएनन् । जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडामा औपचारिक सम्मेलनबाट पारित भएका बिषयबस्तुलाई विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने माग नुुवाकोट कांग्रेस सभापति केसीले गरेका थिए ।
बहुसख्यक जिल्ला सभापतिको मागलाई संवोधन नगरिएको भन्दै कड्किएका केसीलाई सभापति देउवाले महासमिति बैठक अवधिभरी बोल्न दिएका थिएनन् । उता केसीले एक महिनाअघि मात्र देशैभरका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइ महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान र संगठनसम्वन्धी प्रतिवेदनले समेट्न पर्ने बिषय भन्दै सुझाव दिएका थिए । तर केसीले नेतृत्व लिन खोजेको र वातावरण भाँडेको भन्दै सभापति देउवले उनलाई बोल्न नदिएका हुन् ।
सह-महामन्त्रीको न अधिकार न कर्तव्य:
हतारमा गरिएको सहमति बमोजिम पार्टी विधानमा आठ जना सहमहामन्त्री बनाउने निर्णय गर्न पुगेका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य र विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदाधिकरीको भूमिका, कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख गर्न भूलेका छन् । आठ जना सहमहामन्त्रीलाई कुन कुन क्षेत्र हेर्न दिने गरी जिम्मेवारी सुम्पन्ने हो भन्ने बिषयमा सहमति नजुट्नदा उनीहको कर्तब्य र भूमिका नै विधानबाट गायव भएको हो ।
विधान कार्यान्वयन तत्काल नहुने:
नेपाली कांग्रेसले आइतबार महासमिति बैठकमार्फत पारित गरेको पार्टीको विधान तत्काल लागू नहुने भएको छ । विधान लागू गर्न पहिले सदस्यता वितरण अभियान शुरु गर्नु पर्छ । तर सभापति देउवा महासमिति बैठकको नारा बमोजिम कांगे्रसको गौरवमय इतिहास र जिम्मेवार वर्तमानको कुरा गरिरहन्छन् । उनले उज्वल भविश्यको लागि कुनै पहल नगर्ने देखिन्छ । विगतको कुरा गर्दा कार्यकर्ता गौरवान्वित हुने र वर्तमानको कुार गर्दा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रुपमा सत्ताधारीको बिरोध गर्नु पर्ने तर्क उनको छ ।
तर, वरिष्ठ नेता र रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने जिम्मेवार वर्तमानलाइ टेकेर उज्वल भविश्यको लागि पहल गर्नु पर्ने बताउँछन् । पौडेल र सिटौलाले महाधिवेशनको प्रकृया तत्काल थालनी गरे मात्र विधान कार्यान्वयन हने तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जिल्ला सभापतिको मागलाई संवोधन गर्न र महासमिति बैठकमा आएका सुझावलाइ समेटेर पारित भएको विधानलाइ कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिले संशोधन र परिमार्जन गर्नु पर्ने वताउँछन् ।